Wasaaradda Waxbarashada DFS oo shaacisay natiijada imtaaxanadkii shahaadiga ahaa – Radio Daljir
Luulyo 24, 2019 6:19 b 0
Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay Natiijada Imtixaankii shahaadiga ee la qaaday dhamaadkii bishii May ee sanadkan, iyadoo Imtixaanka ay u fariisatay 29,434 Arday oo Imtixaanka ku galay 106 xarumood oo ku yaala Muqdisho iyo Gobollada Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Imtixaanka ayaa waxaa ku gudbay illaa 22,499, halka ay ku hareen 6935 arday, sida lagu soo bandhigay natiijada rasmiga ah ee ay soo saartay Wasaaradda Waxbarashada.
Wasiirka Waxbarashada ee Xukuumadda Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre ayaa sheegay in 10-ka Arday ee ugu horeeya ee gashay kaalmaha koowaad ay heli doonaan deeq waxbarasho oo lacag la’aan ah oo dalka iyo dibadda ah meesha ay doonaan.
Imtixaankan shahaadiga ayaa waxaa bilowgiisa hore waxaa ka dhashay muran, kaddib markii Wasiirka waxbarashada uu ku dhawaaqay markii Imtixaanka oo socday saddex maalin la joojiyay, sababo ku aadan in qishkii Imtixaanka uu baxay, waxaana mar kale dib loo qaaday Imtixaanka 27-kii bishii May.
Xildhibaan Fiqi “Waan baaraynayaa shirqoolada lagu soo eedeeyey safiirka Qatar” (dhegayso)